Eminyakeni 25, M. Yu. Lermontov itholakala Petersburg phakathi izimbongi engcono. Ekugcineni kwafika Upper Khanyisa, okuyinto ke abazange bamukele ngaphambili. Ngalesi sikhathi lapho kwakwaziswa kakhulu njengoba imbongi, kodwa temibhalo yephrozi netindzaba sakhe singakutholi impendulo phakathi kwabantu besikhathi sakhe. Kwakuphakathi nalesi sikhathi, M. Yu. Lermontov wabhala inkondlo egcwele romance ebabayo "I Novice." Ukuze uqonde isimo sengqondo komlobi le Novice, hero abasha kule nkondlo, kubalulekile ukuhlaziya elikuqukethe.
Lo mcimbi, ukhanda, amashwa bancishwa wengane ebuntwaneni. Lesi sihloko eduze Lermontov, futhi kungalesi sikhathi abaningi usebenza ngandlela-thile ukuze emuva kwakhe. Kodwa lapha yembulwe force okugcwele. Eyayenziwe dephula bomdabu olwenzeka endaweni umfana iminyaka yabo eziyisithupha - lo muntu, vele uyakwazi ukuhlaziya kancane futhi ikhono ukukhumbula izinto azenza esikhathini esidlule, ehlupheka phakathi unkom 'idlayodwa abadala ngubani ngokuzithandela wakhetha lendlela. Isimo Umbhali ngokugcwele Novice okuzwelana ngomntwana baphoqeleka ukuba bachithe isikhathi izinsuku alikho imidlalo emgwaqweni noma ukulalela izindaba enkazimulweni bezintaba ubudala oyise, ezindongeni avaliwe yesigodlo, lapho konke kuncike elalenziwa futhi esiqinile ngomthandazo.
Bese kuthi-ke esekhulile insizwa enquma aphume ekuthunjweni. Autumn ebusuku, ugijimela ekhaya lezindela, lapho waphoqeleka ukuba athathe izithembiso zakhe futhi ukuphika phakade kusukela ukuphila. edlubulundayo imvelo freestyle yakhe umbhikisho ngokumelene emaketangeni ejele atjengisa ngazo bona gade ngengozi. Njengoba uthi, ukuthi okungenani ezimbili ezifana impilo elokuthula basekuthunjweni, uzimisele ukushintshashintsha oyedwa, kodwa egcwele izinkathazo izimpi. Lapho abantu bafana izinkozi freestyle. Lokhu ephelele ilangabi abanothando inkululeko kucacile futhi uvale Lermontov nasesimweni sengqondo komlobi le Novice ngezinga elithile ngokuphila - imbongi uphoqelekile ukuba siphile hhayi impilo khulula, kufeza, ke ulalela imiyalo, ichitha isikhathi esiningi sokuphila kwakhe ekudingisweni, todvwa kubantu abaseduze naye.
Yena ingane ngeshwa, futhi isiphetho zazihlose kuye indima indela lapho eseneminyaka ngokwemvelo neqhawe, othanda ukulwa. Wayekhona sezindela azizwa ucezu ukuthi alishiye amagatsha, nokuthi umoya lishaya lapha, ngaphansi izindonga belusizi eduze. Ugijimela ezweni lakubo, lapho wagcina izinkumbulo ezingacacile - ngomzana, ozidlayo, odade amashuni. Ulangazelela ukubuyela ekuphileni kwakhe zemvelo, futhi isimo salo mbhali sokufaka le Novice kubonisa ukuthi lokhu ngiyibona waphakamisela wayeka, yize le nsizwa, futhi benawo ukugcwala amathuba ezingokomoya.
Ngoba ukufa yemvelo ngakho hero. Lapha akunandaba ukuthi Amanxeba abangelwa endle ingwe mpi. Le nsizwa ngabe umane egqwalile kusukela ukuthula Izigodlo kanye obucwathile. Noma yokuphunyuka langempela noma ukufa - ingekho enye indlela i-hero alikho.
Instinct limbiza sikhuthele. Konke - samuntu amabutho ezinganeni. Futhi esigodlweni sezindela banayo ndawo ukunamathisela. Lawa ngenhla sengqondo komlobi le Novice uhlamvu.
Ku ingilazi inqubo Umdwebo zokuhlobisa ungakwazi kahle ngamunye
Orest Kiprensky: izithombe nezincazelo. Umculi Orest Adamovich Kiprensky
Multiplexers futhi demultiplexers e kagesi
INtaba YeThempeli - shrine yezinkolo ezintathu